प्रचण्डले बोलाएका सचिवालय बैठकमा बादल गएनन् - Kendra Khabar
प्रचण्डले बोलाएका सचिवालय बैठकमा बादल गएनन्
२०७७, २५ कार्तिक मंगलवार २०:३७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद चर्कीदै जादा नेताहरु गुटगत छलफलमा व्यस्त छन् ।
बालुवाटार खुमलटारका बैठकले पार्टी भित्रको विवादले कुन हदसम्म उग्ररुप लिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार र अर्कां अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले खुमलटारमा बैठक गदै आएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटारमा पछिल्लो समय सचिवालयको अनौपचारीर बैठकमा बस्दै आफ्नो समुहको रणनिति बनाइरहेका छन् । तर, प्रचण्ड नजिक मानिने सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भने खुमलटार गएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असहमति भएपछि प्रचण्डले बोलाएका तीनैवटा अनौपचारिक बैठकमा बादल सहभागी भएका छैनन् ।
बादल यसअघि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बोलाइएको अनौपचारिक भेलामा भने सहभागी भएका थिए । पार्टीभित्र ओली र दाहाल पक्षको विवाद चर्कीदै गर्दा सचिवालय सदस्य कस्को गुटतर्फ भन्ने विषयले महत्व पाउदै आएको छ ।
प्रचण्ड समुह सचिवलायमा बहुमतमा छ । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड समुहमा छन् । भने ओली समुहमा ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल खुलेर लागेका छन् । पार्टी एकाता हुदाँ बादल प्रचण्ड समुहमा थिए । पछिल्ला केही विवादमा खुलेर नबोलेका बादल ओली समुहमा लागेको पनि चर्चा हुनेगरेको छ ।
१५ गतेको खुमलटार भेलामा गएका बादल त्यसपछि प्रचण्डले बोलाएका सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित हदै आएका छन् ।
सचिवालय सदस्य बादल अहिले कुन गुटमा छन ? ओली कि प्रचण्ड ? प्रश्ट देखिदैन ।
बादलले पार्टी विभाजन हुनुहुदैन भन्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रचण्ड नजिक मानिने बदल अहिले खुलेर प्रचण्ड गुटमा देखिदैनन् । उसोत उनि ओली गुटमा लागेको भन्ने बलियो आधार पनि भेटिदैन ।
सचिवालयमा अल्पमतमा रहेको ओली समुहलाई प्रचण्ड समुहले बहुमतको दवाव सृजना गरिरहेको छ । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेल बादल अझै खुलेका छैनन् । थोरै बोल्ने नेताको रुपमा चिनिने बादल न्तिममा मात्रै बोल्ने गर्छन् ।
विवाद भए पनि कुनै हालतमा पार्टी विभाजनमा जानु हुन्न भन्ने बादलको अडानका कारण उनि गुटमा खुलेर नलागेको उनि निकट बताउछन् ।
गण्डकीमा थप ४० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण
थप २४० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि
प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण: न्यायाधीशलाई भेटेको छैन
पोखरामा कांग्रेसको विरोध सभा
प्रतिस्पर्धी पार्टी निर्वाचनमा लागिसक्योः नेम्वाङ